Posted by တန်ခူး at 6:32 AM
အမေတူသားလေး ရေးတဲ့ စာတွေ အခုကတည်းက သဘောတွေကျနေတာ...ကြီးလာရင်ရေးမည့်စာတွေလည်း အန်တီတာတို့က အားပေးဦးမှာ...
သားသားကို မမ ပြောတဲ့ ပုံပြင်လေးတွေ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
အမရဲ့သားလေး ချစ်စရာကောင်းတာဖတ်ပြီး ပြုံးနေမိတယ်။
နည်းနည်းကြီးလာတော့မှ ဘလော့လုပ်ပေးလိုက်လေ ...
ပျော်ရွင်စရာမိသားစုဘ၀လေးကိုခံစားရသလို သားကောင်းရတနာလေး ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
သားလေး ကြီးလာရင် ဒီစာလေး ဖတ်ခိုင်းပါလား မတန်ခူး။ ပြီးတော့ အမေပိုတူသွားအောင် ကိုပီတိ ပြောသလို ဘလောက်လေး လုပ်ပေးလိုက်။
love to read,ama...
For me, If I think i am right, i never cry and so stubborn.
If my dad strike to me, then,.. I did myself painful more than my dad
.Sometimes, my doing things is amazing,so..my dad afraid to strike to me.
And also I didn't eat rice3days.
So, they never strike to me. Only they said using story. :)
ama,..I don't like to drink draft when I was sick in childhood,so i always throw .:))
My family didn't know.:))
i love ur son.
plz visit to Japan,ama...
သားသားက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး သဘောကျလိုက်တာ အရမ်းပဲ။ အမ သားသားအကြောင်းရေးသမျှ အကုန်ကြိုက်တယ်။
ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ်နဲ့တူတယ်ဆိုရင် စိတ်ကြည်နူး ပီတိ ဖြစ်ရတာ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်မိတယ် အမရေ။ ချိုသင်းအိမ်က ကြောင်မလေး ချိုသင်းနဲ့ ကြာလေ အကျင့်တူလာတာတောင် ကြည်နူးလို့ မဆုံးဘူး။ အမလို လူ သားလေးဆိုတော့ ပြောစရာ မရှိပေါ့။
အိမ်က မောင်ကြီးကတော့ ပြောတယ်။ အမေက ချွဲ၊ သမီးက ချွဲ၊ အမေ က ဆိုး၊ သမီးက ဆိုး ငါတော့ ရူးတော့မယ် တဲ့။ ဟားဟား...
ဆံပင်ကြီးကြီး နဲ့လူကြီး သားလေး က..ဆံပင် ပျော့လေး ဖြစ်သွားပြီလားး)
သားလေး အကြောင်း လာဖတ်သွားတယ်..
တန်ခူးသားက တန်ခူးနဲ့ရော အကိုနဲ့ပါ တူပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို လက်စဖျောက်ပုံလေးကို သဘောကျတယ်။ မစ္စတာဘင်းမ် ဟာသထဲက ဟို အသားတွေကို လျှောက်ဖွက်တာကို သတိရမိတယ်။း-)
Tag ထားတဲ့ ဆိုဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေး.. သေချာကြီးကို ရေးနေတာ.. ဒီစနေ တင်မယ်နော်..။(
စကားမစပ်.. သားသားကို ချစ်တာနဲ့ မေမေကြီးနဲ့ ဖေဖေကြီးကို တခု ပြောဦးမယ်..။ နောက်ထပ် သားသားလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေးဖြစ်ဖြစ်.. ညီလေးဖြစ်ဖြစ် မွေးပေးပါလို့..။ တဦးတည်းသောသားလေးဆို.. ဗိုလ်ကျရင်ကျ.. မကျရင် လောဘလေးကြီး.. မဟုတ်ရင်တော့ စိတ်အားငယ်တတ်တယ်ဗျ.. သေချာတယ်။ သနားပါတယ်အေ.. :D
တန်ခူးသားလေးက တော်လိုက်တာ။ အမေတူသားဆိုတော့ စာရေးကတော့ ကောင်းမှာပေါ့လို့ ...
အိမ်ကသမီးလေးကလဲ အဖေတူ။ အကျင့်အချို့က အမေတူ။ သူ့အဖေက မကောင်းတာတွေ့ရင် အမေအကျင့်တွေလို့ အမြဲပြောတယ် ။ ကိုယ်ကလဲ ဆိုးတာကိုး။
အမတို့ မိသားစုနဲ့ သားလေးအကြောင်းဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ..
သားက SMS မှာ ရေးထားတာများ ချောလို့.. အမနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ သဘောကောင်းမှာ သေချာတယ်.. :)
သားသားကို ပြောပြတဲ့ ပုံပြင်လေးတွေလည်း ရေးပေးနော် အမ.. :)
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးတွေရဲ့ အမူအကျင့်အကြောင်း ရေးရတာ ဖတ်ရတာ ပျော်စရာပေါ့။
ချစ်စရာ သားကလေးနဲ့ ချစ်စရာ အမူအကျင့်လေးတွေဖတ်ရတာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ...
ဟုတ်တယ်... သေချာတာက သားက အခု နဲနဲကြီးလာတော့ တန်ခူးနဲ့ ပိုတူလာတယ်...
မွေးထားရတဲ့ အမေ ဆိုတော့ ကိုယ့်သားကို ကိုယ်နဲ့ပိုတူစေချင်တဲ့ စိတ်ကလေးတွေ အမေတိုင်းမှာ ရှိကြတယ် ထင်ပါ့... အထူးသဖြင့်တော့ တဦးတည်းသော သားတွေဆို ပိုဆိုးတယ်... အစစ အရာရာမှာ ကောင်းတာရော ဆိုးတာပါ ကိုယ်နဲ့သာ အားလုံး တူစေချင်တော့တာပါပဲ...
i like so much ur post.
last time i couldn't feel well like these posts.nowadays,beingafather,i understand parents' metta...
those posts.i look forward to more of ur posts.
may ur family be happy always.
အမလဲ တဦးတည်းသော သားရဲ့ အမေလေ ..
သားလဲ ဘယ်သန်ပဲ ဒါမယ့် အဖေတူတာ..
ချစ်စရာအမေတူသားလေးပေါ့..အခုတောင် sms တွေကောင်းကောင်းပို့တတ်နေပြီ..သားလေးကတော့ကွာ..ဟဲဟဲ...မေမေ့ခြေရာနင်းတော့မယ်ထင်တယ်..တန်ခူးကလည်း ဘယ်သန်ပဲလား...ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ လက်စဖျောက်တာ ဖတ်ရင်း ရီမိတယ်..
သားက ဆရာမကို ချစ်တာကို နည်းနည်းအူမတိုမိဘူးလားဟင်..
မလေးဆိုရင်တော့ အူတိုမိမလားမသိ :p
သားသား အကြောင်းတွေ မဖတ်ရတာကြာ ပေါ့ အစ်မကြီးရေ့ အစ်မတို့ မိသားစုကို သတိရတယ် ။
ရှားရှားပါးပါး ... စာရေးတတ်တဲ့... (RIT)...ကျောင်းသူ(အမ) တယောက်ပါပဲ...